Dood-cilmiyeed heer sare ah oo ku saabsan hirgelinta Baaqa Qaramada Midoobay ee ku saabsan Waxbarashada iyo Tababbarka Xuquuqda Aadanaha: dhaqamada wanaagsan iyo caqabadaha - Hadalka furitaanka ee Ku-Xigeenka Sare ee Xuquuqda Aadanaha - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Dood-cilmiyeed heer sare ah oo ku saabsan hirgelinta Baaqa Qaramada Midoobay ee ku saabsan Waxbarashada iyo Tababbarka Xuquuqda Aadanaha: dhaqamada wanaagsan iyo caqabadaha
Hadalka furitaanka Kate Gilmore, Kuxigeenka Wakiilka Sare ee Xuquuqda Aadanaha
(Maqaalka asalka ah: Xafiiska UN ee Wakiilka Sare ee Xuquuqda Aadanaha. Sebtember 14, 2016)
Sharafta, asxaabta iyo asxaabta,
Goluhu wuxuu daruuri ku howlan yahay ka hadalka arrimaha dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha ee adduunka iyo dhibaatooyinka daba dheeraaday - laga soo bilaabo saboolnimada ilaa colaadda, takoorka iyo ka-saarista, cudurrada laga hortegi karo, xabsi been ah, saamaynta isbeddelka cimilada iyo wixii ka dambeeya. Maalin kasta, waxaa na horyaalla warar dheeri ah oo naceyb ah oo midba midka kale diyaar u yahay rabshad; iyo jawaabta siyaasada inta badan waxaan markhaati ka nahay inay sii kordheyso rabshadaha iyo argagaxa - taasoo horseedeysa argagax iyo rabshado badan - oo ah meel lagu kala wareego waxay umuuqataa meela badan oo hoos u dhigaya cawaannimada casriga ah.
Istaraatijiyadaha wax looga qabanayo caqabadaha adduunka laguma koobi karo kuwa ka dhashay xanaaqa ama damaca aargoosiga ama jilibka wareegyada doorashooyinka gaagaaban - sida ku qasbaya realpolitik sida ay noqon karaan. Xikmadda halkii ay ka ahaan laheyd hogaaminta dowladnimo ee u qalma magacaas waxay aqoonsan tahay in waqtiyo badan oo fog jaangooyooyinku ay qaabeeyaan ajandaha siyaasadda guud ee bulshada iyo aalado badan oo siyaasadeed ayaa bixiya xalal waara oo aan ka aheyn ballanqaadka beenta ah ee laadka markii la haraaga ama feedhka markii la feero.
Hase yeeshe, in xikmadani ay ka adkaato dano badan oo faa'iido leh, qiyamka asaasiga ah ee hoggaaminta iyo dadka wax dooranaya ayaa si aad ah u muhiim ah. Haddii go'aamadeenna - xulashooyinka aan qaadanayno ay ku saleysan yihiin faham wadaag ah oo aan wada leenahay oo aan ka wada tirsanahay hal qoys oo bani'aadam ah iyo in qofkeen kasta uu si siman u istaahilo sharaf, xushmad iyo caddaalad, markaa liistada liidata ee xulashooyinka siyaasadeed ayaa noo furan xadadka kuwa uu soo qoray by xoog ka sax.
Gudbinta qiimayaashan asaasiga ah iyo kuwa caalamiga ah - iyo baaritaanka saameynta ay ku yeelan karaan nolol maalmeedkeenna - haddii aan awood rasmi ah u leenahay iyo in kale - taasi waa hawsha waxbarashada xuquuqda aadanaha (HRE).
Dhowr daqiiqo Premalatha, Cunug Dalit ah oo ka yimid tuulo ku taal Tamil Nadu halkaasoo saboolnimada, iyo takoorka ku saleysan heyb sooca iyo jinsiga, ay u qaabeyso nolosha carruurta laga bilaabo dhalashada, ayaa nala wadaagi doonta xikmadeeda su'aashan. Premalatha barnaamijkeedii waxbarashada xuquuqda aadanaha ee dugsigeeda, waxay ku baratay wixii ay qalbigeeda ku ogayd inay run tahay - inay la siman tahay qof kasta oo kale oo bini aadam ah; in bulshada caalamku tan ku qeexday xuquuqdan, iyada oo ka xaqiijinaysa qiimaheeda soo jireenka ah, waxay ka helaysaa xoog iyo kalsooni mustaqbalka. Xitaa iyada oo aan isbeddel lagu sameynin duruufaheeda maadiga ah waa la beddelay - dib dambe uma noqon dhibbane laakiin waxay tahay difaaca xuquuqda aadanaha, diyaar u ah una diyaar ah inay u istaagto xuquuqdeeda iyo tan kuwa kale.
Taasi waa awoodda aan caadiga ahayn ee wacyiga xuquuqda aadanaha iyo waxbarashadu waa dardar-gelinta isbeddelkaas. Isku-darka helitaankiisa, caqliga, xaqiiqooyinka, caddaynta iyo runta duugga ah, carruurta iyo dadka waaweyn waxay ku soo baxaan miyir-qabka iyaga iyo kuwa kale ee xuquuqda soo-jireenka ah si ay u sheegtaan si wax ku ool ah oo ay u difaacaan si guud; si loo xoreeyo, xulashooyin xog ogaal ah; si loo kobciyo garashada iyo fikradaha rabitaanka cuntada - si loo xaliyo khilaafaadka aan rabshad lahayn, iyo in si wax ku ool ah loogu biiriyo sameynta bulshada iyo cusboonaysiinta iyo joogtaynta. HRE waxay taageertaa fekerka muhiimka ah, fekerka falanqaynta ee halka fassiintu ay si kale u noolaan karto waxayna ku martiqaadeysaa wacyigelinta xalalka loo dhan yahay ee ku saleysan dulqaadka, sharciga oo lagu dhaqmo midna loo wada dhan yahay. Iyo, waxay ka caawinaysaa kuwa xambaarsan waajibaadka xuquuqda aadanaha - kuwa mas'uulka ka ah ilaalinta iyo fulinta xuquuqda inay la kulmaan waajibaadkaas.
Laakiin HRE kaliya maahan nuxurka manhajka. Sababtoo ah waxay nagala hadlaysaa nafteena ugu dhow - Yaan ahay? Maxaan salka ku hayaa oo aan ku go'aansan karaa ficilkeyga maalinlaha ah? Codkee baan maqlayaa? Sababtoo ah awoodsiintan iyada oo loo marayo waxbarashada xuquuqda aadanaha waxay ka badan tahay waxa keliya, habka waxbarashadu waa inuu sidoo kale ahaadaa khuseeya nolol maalmeedka iyo waayaha nololeed ee bartayaasha. Si ay u noqoto mid wax ku ool ah, habka barashada xuquuqda aadanaha ee nidaamka waa inuu ku lug yeeshaa kuwa uu la hadlayo, iyada oo loo marayo habab wax ku ool ah oo wax lagu barto, lagu galo wadahadal ku saabsan macnaha aadanaha iyo ujeedka - oo ku saabsan sida xeerarka xuquuqda aadanaha loogu turjumi karo xaqiiqo.
Wadahadalkayagu maanta wuxuu ku saabsan yahay shan sano tan iyo markii uu ansaxiyay Golaha Guud ee Baaqa Qaramada Midoobay ee ku saabsan Waxbarashada iyo Tababbarka Xuquuqda Aadanaha. Baaqani wuxuu dhigayaa barashada xuquuqda aadanaha iyo tababbarka inay yihiin tiir dhexaad u ah mashruuceena weyn si loo xaqiijiyo dhammaan xuquuqda dhammaan. Waxay xoojineysaa waajibaadka Dowladaha sida ku xusan sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha si loo bixiyo loona fududeeyo waxbarashada iyo tababarka xuquuqda aadanaha, iyo sidoo kale doorka muhiimka ah ee ay leeyihiin jilayaasha kale ee qaranka - sida hay'adaha qaran ee xuquuqda aadanaha iyo ururada bulshada rayidka ah. Waxay muujineysaa qiimaha dadaallada daneeyayaasha badan iyo baahida loo qabo in lagu taageero dadaallada qaran ee habab caalami ah ee xuquuqda aadanaha iyo iskaashiga caalamiga ah guud ahaan.
Ansixinta Baaqa, sanadkii 2011, waxay ka mid ahayd geedi socod dejinta heerka ee ka bilaabmay Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha, kaasoo si cad ugu xilsaaran shaqsi kasta iyo hay'ad kasta kobcinta ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyadoo loo marayo baridda iyo waxbarashada. Tan iyo markaas, qodobada ku saabsan waxbarashada xuquuqda aadanaha waxaa lagu soo daray qaar badan qalabka caalamiga ah.
Dowladaha xubinta ka ah ayaa sidoo kale korsaday qaar badan qaabdhismeedka caalamiga ah ficilka sida Tobankii sano ee Waxbarashada Xuquuqda Aadanaha, oo dhammaatay 2004, iyo Barnaamijka Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha ee socda. Waxbarashada xuquuqul insaanka sidoo kale waxaa lagu daray Ajandaha 2030 ee Hormarinta Waara, iyadoo ah bartilmaameed gaar ah oo ah Himilada 4aad ee waxbarashada tayada leh.
Sidaa darteed, caalami ahaan, waxaan goobjoog ka ahayn bilaabida dadaallo fara badan oo lagu dhiirrigelinayo waxbarashada iyo tababarka xuquuqda aadanaha. Si kastaba ha noqotee, dhammaan qalabkan iyo ballanqaadyadu waxay leeyihiin qiimo yar illaa ay awoodaan mooyaane dhiirrigeliya ficil dhab ah heer qaran iyo heer degmo, halkaasoo looga baahan yahay inay si joogto ah uga dhacdo waxbarashada iyo tababbarka xuquuqda aadanaha.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in tan ay dhaceyso. Warbixin dhowaan ka soo baxday Xafiiskeyga iyadoo la tixraacayo Barnaamijka Adduunka (A / HRC / 30/24) ayaa lagu wargeliyay, in dalalka qaarkood, hay'adaha ay sii kordhayaan barnaamijyada waxbarashada xuquuqda aadanaha, iyadoo la adeegsanayo qalab wanaagsan iyo habab iyo wadashaqeyn sii kordheysa oo ka dhex socota waaxaha dowladda iyo dowladaha, akadeemiyada, hay'adaha xuquuqda aadanaha ee qaranka iyo ururada aan dowliga ahayn.
Gudigani wuxuu ujeedkiisu yahay inuu hubiyo inaan sii wanaajinayno. Aan soo bandhigo shan xoojin, si aad uga fiirsato doodaada, galabta iyo wixii ka dambeeya.
First, waxbarashada xuquuqul insaanka waa in lagu macneeyaa - waa inay wax ka qabataa xaqiiqooyinka jira iyo caqabadaha gaarka ah ee xuquuqda aadanaha ee dadku la kulmaan noloshooda.
Marka labaad, waa inay noqotaa oo ay weheliso xeelado ballaadhan oo xuquuqda aadanaha ah kuwaas oo si guud wax uga qabta dhibaatooyinka isla markaana ku lug leh koorsooyin kale oo badan oo ficil ah - dib-u-habeyn hay'adeed, si loo magacaabo mid. HRE waa lama huraan laakiin kuma filna.
Saddexaad, waxbarashada xuquuqul insaanku waxay ubaahantahay dhamaan jilayaasha inay lashaqeeyaan, heer kasta - heer deegaan, heer qaran, heer gobol iyo heer caalami. Waxaan ka maqli doonnaa xubnaheenna wada-hadalka dadaallada qaran ee wadajirka ah, oo dhiirrigelin u noqon kara dalalka kale. Waxaan rajeynayaa in gudigani sidoo kale uu eegi doono xoojinta doorka hababka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo hay'adaha si loo taageero dadaallada qaran.
Afaraad, an hagaajinta nidaamka warbixinta iyo kormeerka dhanka xuquuqda xuquuqul insaanka waxay dhiiri gelin kartaa hirgelinta qaranka iyadoo loo marayo faafinta dhaqanka wanaagsan iyo talooyinka khubarada. Ajendaha 2030 ee Hormarinta Joogtada ah wuxuu siinayaa fursad dheeri ah inay tan dhacdo.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, oo aan u soo noqdo odhaahdaydii ugu horreysay, waxbarashada xuquuqda aadanaha waxay kobcisaa dadnimadeenna guud ka baxsan kala duwanaanta shaqsiyadeena. Ma aha “ikhtiyaar ikhtiyaar ah” ama waa waajib kale oo caadi ah. Waxay baraysaa casharo aasaasi ah.
Maaha inaad iga jeclaato inaad ixtiraamto xuquuqdayda. Ma aha inaan kugula raaco adiga si aan u ilaaliyo xuquuqdaada. Uma baahnid inaad ahaato aniga oo kale, si aan u ilaaliyo xuquuqdaada. Xuquuqdu maaha nidaam lagu oggolaado ama lagu qaddariyo - maahan abaalmarin ama natiijo imtixaan ama bandhig quruxeed. Xuquuqdu waa tan ugu fiican tan ugu xunna. Midkeen kasta - marka laga reebo midkeenna dantiisa oo dhan.
Marka la soo koobo, waxbarashada xuquuqul insaanku waa mid muhiim u ah joogtaynta wadajirka bulshada, kor u qaadista ka mid noqoshada iyo kaqeybgalka iyo ugu dambeyntii looga hortago rabshadaha iyo isku dhaca bulshadayada. Waa maalgashi mustaqbalkeena ah oo aanaan awoodin inaan iska indhatirno.
Waxaan maanta hibo u leenahay jiilka ugu weyn adduunka ee carruurta iyo dhalinyarada - kan ugu weyn ee abid la arko taariikhda aadanaha oo dhan. Iyagu waa jiilka horumarka waara. Waxay ku socotaa saadaalkooda ah in horumarka aadanaha ee 15ka sano ee soo socda uu kici doono ama dhici doono. Runtii caqli baan leenahay markaan dhegeysanno hadalada Nelson Mandela oo aan la barbardhigi karin ayaa yiri,Tacliintu waa hubka ugu awoodda badan ee aad u adeegsan karto beddelka adduunka”. Miyaanay ahayn waqtigii aan isku hubeyn lahayn hubkan ugu fiican - manaahijta hoosta ka xariiqaysa inaan ku dhalanay ficil ku dhashay xuquuq iyo sharaf.
Shirka wuxuu ku baaqayaa in la dhexgeliyo Waxbarashada Xuquuqda Aadanaha
December 11, 2018 Warbixinnada Waxqabadka 0
Maalgashi dheeraad ah ayaa looga baahan yahay waxbarashada xuquuqda aadanaha iyo xoojinta bulshada rayidka ah si wax looga qabto sinnaan la’aanta iyo joogtaynta. Tani waxay ahayd farriin muhiim ah oo ka timid Shirweynihii Sagaalaad ee Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha (ICHRE) oo lagu qabtay magaalada Sydney, Australia. [sii wad akhriska…]
Arrin gaar ah oo cusub oo ah Macallinka Xag-jirka ah ee baraya xuquuqda aadanaha - helitaanka furan
Macallin Xagjir ah, Vol 103 (2015) Waxbarida Xagjirnimada ee Xuquuqda Aadanaha: Qeybta Koowaad ee Tusmada Hordhac: Barida xagjirnimada ee ku saabsan Xuquuqda Aadanaha; Michael Bennett, Susan O'Malley Dhaqdhaqaaqa Caalamiga ee Waxbarashada Xuquuqda Aadanaha; Ubaxyada Nancy [sii wad akhriska…]
Madaxweynaha Malta: "Xaquuqda waxbarasho waa xuquuq aadanaha"
July 3, 2019 Warar & Muuqaal 0
Madaxweyne George Vella wuxuu kaloo sheegay inay lama huraan tahay in dib loo helo "aasaaska nabada waarta ee aduunkeena" wuxuuna carabka ku adkeeyay in siyaasiyiintu aysan sharci dejin karin nabadda, laakiin ay "kor u qaadi karaan waxbarashada nabada." [sii wad akhriska…]